China inoraswa inodzivirira zvipfeko, isina chena Kugadzira uye Fekitori | Jingzhao
Muenzaniso: chidimbu chimwe chete hood chisina kuvhara bhutsu
Tsanangudzo: s, m, l, XL, XXL, XXXL
Inoshandiswa nevashandi vezvokurapa mumasangano ekurapa kudzivirira kutapukirwa kwehutachiona kubva kuvarwere kuenda kuvashandi vekurapa nemhepo kana mvura.
Chigadzirwa chinoitwa uye chimiro chimiro:
Ichi chigadzirwa chinonyanya kuve chakaputirwa pamusoro, tirauzi, rabha tambo uye kumashure kora logo. Inonyanya kugadzirwa nepamusoro-soro polyethylene fiber jira, iyo inogadzirwa neHooded imwe-chidimbu dhizaini uye yakasimbiswa neirabha strip.
1. Ndapota sarudza uye simbisa muenzaniso wekudzivirira usati washandisa.
2. Hembe yekudzivirira inokodzera saizi yako inofanirwa kusarudzwa zvinoenderana nechimiro chako.
3. Pfeka zvipfeko zvinodzivirira kuti uve nechokwadi chekuti murindi wekupinda wakavharwa mune yakanaka mamiriro. Ndokumbirawo usarudze kana kupfeka
zvimwe zvekudzivirira pazvinodiwa. Kana kumeso, ruoko / rutsoka ruoko uye kumwe kuvhura kwakavharwa netepi, iyo yekudzivirira mhedzisiro ichave iri nani.
Chenjedzo, yambiro uye zvirimo mukati:
1. Ndapota verenga bhuku racho zvakanyatsonaka usati washandisa.
2. Usati washandisa, ndapota nyatsotevedzera mashandisiro uye mashandisirwo ezvekurapa zvekudzivirira zvipfeko zvepamusoro-soro polyethylene fiber jira rerabha. Vashandisi vanofanirwa kutonga kana chigadzirwa chacho chakakodzera nguva dzakasarudzika vega. Kana nguva dzekushandisa dzikadarika ekushandisa uye ekushandisa zvirambidzo zvechigadzirwa, isu hatiite chero vimbiso kune izvi, kana kutora chero basa rine chekuita neizvi.
3. Ndapota dzivisa zuva rakananga.
4. Ichi chigadzirwa chinonyungudika pa135 ℃, ndokumbirawo ubve panopisa moto uye vhura moto kana uchishandisa.
5. Ichi chigadzirwa chinoraswa. Ndokumbirawo mubate zvinoenderana nezvinodiwa nemitemo yekudzivirira biosafety mushure mekushandisa.
6. Izvo zvinorambidzwa kune avo vanokanganisa polyethylene jira.
7. Ichi chigadzirwa ipaki yakaomeswa. Kana pasuru yacho yakanganisa, ndapota usashandise. Usati wapfeka, ndapota tarisa zvipfeko zvinodzivirira nemaziso. Kana paine kukuvara, kutsvuka, kusvibiswa uye mamwe mamiriro, ndapota usazvipfeke.
8. Chigadzirwa hachifanirwe kushandiswa kupfuura nguva yekutendeseka.
Anoshanda zuva: chete yekushandisa panguva yedenda rekukurumidzira nguva
Zuva rekugadzira / batch.: ona chitaridzi
Kuchengetedza uye kutakura mamiriro: ndapota dzivisa zuva rakananga uye uchengetedze pakushambidzika kwemukati munzvimbo inotonhorera uye yakaoma.
Tsananguro yemazita, zviratidzo, zviratidzo, zvipfupiso, nezvimwe
Zita rekunyoresa / mugadziri: Nanchang Jingzhao Medical Technology Co., Ltd.
Adress: Kwete 318, Gong Ye 1LU (Maodzanyemba), Xiaolan Economy Development Zone, Nanchang, JiangXi, China.
Pashure: Disposable voga zvipfeko
Zvadaro: Disposable isiri yakarukwa mbatya dzekuvhiya